/Blog/Weight Loss/Ny top 10 Top Best Selling Weight Loss Supplement
Posted on 09 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Weight Loss. Manana izany 58 Comments.
Weight Loss Tantaran'ny zava-mahadomelina
Ny fidangan'ny vidim-panafody voalohany, izay antsoina hoe fanodikodinana fatim-paty tamin'izany fotoana izany, dia tonga tamin'ny faran'ny 1800s. Na dia niteraka fiantraikany mahery vaika aza ny zava-mahadomelina dia mbola azo ampiasaina izany mandrapahatongan'ny 1960s.
Ny fanafody vaovao antsoina hoe Dinitrophenol dia nampidirina tao amin'ny 1930s ary nanjary nalaza tamin'ny fitantanana ny fahaverezan'ny lanja. Ny zava-mahadomelina dia namokatra fiantraikany goavana tao amin'ny vatana, nanamora ny fahaverezan'ny fahavoazana.
Tamin'ny tapaky ny 1950 dia nanjary nisy ny amphetamine ary nanjary lany tamingana ny safidy. Nanamora ny fatiantoka tamin'ny fihenam-bidy tamin'ny fanafoanana ny fiankinan-doha. Mampalahelo fa nitombo ny mety ho fisian'ny hypertension ho an'ny havokavoka, ka nahatonga azy hisintaka tamin'ny tsena tao amin'ny 1968.
Ao amin'ny 1970s, ny ephedrine dia nanjary fitsaboana voatondron'ny fahaverezan-danja. Ny zava-mahadomelina, na izany aza, dia niteraka fanehoan-kevitra vitsivitsy izay nahatonga azy ho lazaina ho voka-dratsy.
Ao amin'ny 1973, ny fenfluramine dia nankatoavina ho fanafarana lany. Ny lazany dia niakatra tao amin'ny 1992 rehefa nampifandraisina tamin'ny phentermine hamoronana zava-mahadomelina lozam-pifamoivoizana antsoina hoe fen-phen. Mampalahelo fa niteraka fiantraikany ratsy ny zava-mahadomelina, izay nitarika ny fialany tamin'ny tsena tao 1997. Tamin'ny vanim-potoanan'ny 21st, ny rongony dia lozam-pifamoivoizana, maro no mifototra amin'ny famolavolana menaka, nanondraka ny tsena.
Ny fihenan'ny rongony
Ny fidorohana zava-mahadomelina dia sokajy ho sokajy telo lehibe araka ny fomba fiasan-dry zareo ary ireto manaraka ireto:
(1) Fanavakavahana (Appetite)
Ny zava-mahadomelina izay mampidina ny tsimok'aretina dia antsoina hoe mpanentana mampihomehy. Matetika izy ireo no manakana ny fialan-tsiny raha miteraka alahelo kokoa noho ny mahazatra. Ny firaiketam-po dia ny fahatsapana "feno" na fahafaham-po azo avy amin'ny fahazoana sakafo. Ny fanamafisana ny appetite dia ny mimicking ny neurotransmitter ao amin'ny atidoha izay mifehy ny fialan-tsasatra, fantatra amin'ny hoe noradrenaline (NA).
Ireo zava-mahadomelina dia mizara rafitra simika mitovy amin'ny NA ary afaka; Noho izany, mamehy ireo mpitsabo ihany koa ny noradrenaline.
Ny rafitra ara-tsimok'ireo mpitsabo mpanentana.
Manatsara ny asan'ny "noradrenaline" koa ny zava-mahadomelina ao amin'ny "foibem-pitehirizana" ao amin'ny atidoha, ilay hypothalamus. Ny hormothalamus olombelona dia mifehy ny fifandanjan'ny angovo ao amin'ny vatana. Ny fampahalalana momba ny trano famokarana angovo tsirairay dia miraikitra ao amin'ny hypothalamus izay mandrindra ny tsimok'aretina sy ny fialan-tsasatra. Ny fatorana nadreneny sy ny fihetsika nasehon'ny hypothalamus dia mampihena ny fiankinan-doha. Ny fanafody toy izany dia:
② Lozisiana HCL (Belviq) CAS: 1431697-94-7
Ny vesatra mavesatra mampidi-bola dia afaka manampy fatotra amin'ny fampihenana ny faniriana, ny fampivoarana ny metabolisma, ary ny fihazonana fialan-tsasatra. Afaka manatsara ny fahaiza-miasa amin'ny fahaiza-manao izy ireo amin'ny fanatsarana ny angovo sy ny fifantohana. Ny fanafody toy izany dia:
(3) Manatsara ny fihinanana
Ireo fanafody ireo dia manimba amin'ny alàlan'ny fahaiza-manaon'ny rafi-pamokarana mba handraisana sakafo mahavelona manokana. Ohatra, fantatr'i Orlistat ny manakana ny fatiantoka mavesatra ary noho izany dia manakana ny fitsaboana matavy. Maro ny fanampim-bokatra hafa nampiharina tamin'ny fampihenana ny fanangonana kalorika ary ny fanakanana ny famoahana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka bebe kokoa momba ity fanafody toy izany isika:
Ny famaritana ny rongony
Ity ambany ity ny famaritana fohy momba ny zava-mahadomelina voatonona etsy ambony.
(1) Fanavakavahana an-kalamanjana (Diabeta)
Sibutramine HCL dia iray amin'ireo fanesoana goavambe malaza indrindra. Mampitombo ny serotonine sy ny haavon'ny angatra ao amin'ny atidoha izany, izay mamehy ny mpitsabo azy any aoriana, mba hifehy ny fahakiviana sy ny fiankinan-doha.
Ny fitsaboana Sibutramine miaraka amin'ny fihinanana sy ny fanatanjahan-tena dia mety hahatonga anao hihena bebe kokoa noho ny fanatanjahan-tena sy ny fihinanana sakafo ny 4.6 kg. Miaraka amin'ny fihenan'ny fihinana sakafo, hita ihany koa ny sibutramine:
• Manandratra ny thermogenesis
• Ampitomboina ny voka-dratsin'ny risika
• Ampitomboina ny atin'ny afobe
• Manamafy ny glucose amin'ny marary amin'ny marary miaina miaraka amin'ny diabeta
• Hatsarao ny mombamomba ny lipid
• Mampitombo ny halavan'ny C-peptide, ny insuline ary ny asidra
Ny rafitra ara-tsimok'i Sibutramine HCL
Ny rafitra ara-tsimok'i Lorcaserin HCL (Belviq)
Lorcaserin HCl dia mifehy ny zava-mahadomelina sy ny fiankinan-doha. Ny zava-mahadomelina dia nankatoavin'ny FDA tamin'ny taona 2012 ho an'ireo olona manana BMI mihoatra ny 30, ary ho an'ireo marary manana vatan'ny Vatana momba ny vatan'ny 27 na mihoatra izay manana cholesterol avo, tsindry ary ny karazana 2 diabetes. Ny zava-mahadomelina koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny mpitsabo 2CV serotonin ao amin'ny atidoha izay afaka manampy ny marary mahatsapa ho feno rehefa avy nalain'izy ireo.
Amin'ny fitsapana ara-pitsaboana, 38% ny olon-dehibe (tsy misy karazana 2 karazany) dia very noho ny 5% ny lanjany, raha ampitahaina amin'ny 16% ny olon-dehibe voatsabo amin'ny plasbo.
Rafitra ara-tsimia ao Rimonabant HCL
Rimonabant HCL ny fahasalamana dia miavaka noho ny fomba amam-panao azy ho toy ny cannabinoid miavaka-1 (CB-1) mpanohitra mpanohitra. Ny endocannabinoïde dia navotsotra tao amin'ny CNS ary nanentana ny lipogenesis, ny fiankinan-doha ary ny fihenan-tsakafo ao anatin'ilay faribolana. Ny Rimonabant HCL dia mikendry ny hanakana ny endocannabinoïde.
Vetivety dia tapaka ny fanafody rehefa alefa ny orana. Ny fahombiazan'io zava-mahadomelina io amin'ny fitsaboana marary miboridana na matavy dia nodinihina tamin'ny fandaharan'asa fitsaboana efatra nifehy na tsia, fantatra amin'ny anarana hoe RIO (Rimonabant in Obesity). Tao anatin'ireo fitsapana ireo, io fitsaboana io dia hita fa mahomby toy ny orlistat sy ny sibutramine.
Ny 2,4-Dinitrophenol (DNP na 2,4-DNP o) dia singa ara-organika miaraka amin'ity rafitra sy rafitra simika ity: HOC6H3 (NO2) 2.
Ny DNP dia miasa toy ny protonophore, mamela ny protons mamakivaky ny membrane mitochondrial anatiny ary noho izany dia mamindra ny ATP synthase. Izany dia hahatonga ny fampiasana angovo ATP tsy dia mahomby. Vokatr'izany, ny sasany amin'ireo hery vokatry ny fifohana rivotra dia simba amin'ny endrika hafanana.
Ny tsy fahombiazan'ny fampandrosoana dia mifanaraka mivantana amin'ny doka avy amin'ny zava-mahadomelina. Raha mitombo ny tahan'ny rongony, dia mitombo ny famokarana angovo fa tsy mandaitra, mitombo ny tahan'ny metabolika (ary ny habetsahan'ny siramamy dia hodorana) mba hamenoana ny angovo herinaratra ary hanonerana ny tsy fahombiazany. Ny DNP no iray amin'ireo mpitsabo tsara indrindra fantatra amin'ny famongorana ny phosphorylation oksidy. Ny Phosphorylation of ADP amin'ny ATP synthashase dia "tsy voafehy na nesorina amin'ny oxidation.
Ny p-synephrine mitambatra dia alkaloid. Midika izany fa fitambarana voajanahary izay mety hita amin'ny zavaboary fa ny tsy fahampiana firy. Ny fitambaran-trano dia misy azony ho fototra.
Structure chimique de synephrine
Ny kafe, ny nikotinina, ary ny morphine koa dia anisan'ny kilasy misy alikaola araka ny mpikaroka. Ny Synephrine dia hita matetika amin'ny fanampiana eo amin'ny sakafo ho an'ny fitantanana lanja na ny fahaverezan'ny fanatanjahan-tena.
Ahoana no fiasan'ny Synephrine ao amin'ny rafitra vatantsika?
Ny chemicals amin'ny p-synephrine dia misy fiantraikany amin'ny rafi-pandehanana amin'ny fanentanana ny mpitsabo mpanohana β3 izay mitana andraikitra manan-danja amin'ny thermogenesis sy lipolysis amin'ny siramamy mena. Midika izany fa ireo solosaina ireo dia hamela ny rafitra handoro ny tavy ho an'ny angovo.
Dimethylamylamine dia zava-mahadomelina namboarina tao amin'ny laboratoire. Ny 1,3-dimethylamylamine (DMAA) dia amperetamine amphetamine izay nampiasaina tamin'ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena namidy tao Etazonia. Nosoratana tamin'ny voalohany izy io tamin'ny voalohany. Amin'izao fotoana izao, dimethylamylamine dia aseho ho toy ny zava-mahadomelina ara-pahasalamana ampiasaina amin'ny fahaverezan'ny fahavoazana, ADHD (fihenam-bolana miady amin'ny fihisatry ny fihenjanana), fanorenana, ary fampiroboroboana.
Clenbuterol, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Clen, dia mpanao fihokoana sy bronchodilator. Matetika izy io no ampiasaina mba hiarovana amin'ny fanafihana amin'ny asmaty. Toy ny steroid toy ny firaisana, fa tsy tena steroid. Miditra ao anatin'ny sokajy agonista β2 izy io.
Ny Clenbuterol dia afaka manomboka ny fihetsikao ara-batana mitovy amin'ny adrenaline. Manatsara ny subtype beta-2 ao anaty rafitra adrenergika izy io. Izany dia miteraka ny ampitomboan'ny cAMP (derivatives ATP ilaina amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny finday). Vokatr'izany dia mitombo ny protein kinase A. Ny protein kinase A dia anzima izay manara-maso ny asan'ny lipidia, glycogen, ary ny metabolism. Ny fitomboany dia mamporisika ny voka-dratsin'ny vatana ao amin'ny vatana. Mampitombo ireo làlana hafa izay manampy amin'ny fandoroana tavy amin'ny alàlan'ny dingana biolojika fantatra amin'ny hoe asidra manify.
Ny menaka matavy dia avy eo ampiasaina ho loharanon-kery ho an'ny fanatanterahana asa. Mampirisika ny mitochondria hamoaka ATP izy io, ka mitombo ny tahan'ny metabolika. Fantatra amin'ny ankapobeny fa ny fampihenana ny tahan'ny metabolista dia manampy amin'ny fahavoazana mavesatra.
Ny rafitra simika amin'ny Salbutamol (Albuterol)
Salbutamol dia fanafody mitandro ny aretin'ny taovam-pandrenesana sy ny ashma ary ny aretina hafa mifandraika amin'ny COPD. Ny fomba fanaon'ny medikaly dia manokatra na manitatra ny andalan-tsofin'ny lunga mandritra ny fanafihana fanafihana atahorana. Satria ny Salbutamol dia misy vokany mampientanentana, ny sasany dia mampiasa an'io fanafody asthma io mba hampitombo ny fahaverezan'ny fatotra.
Albuterol dia tsara indrindra ampiasaina amin'ny programan'ny lozam-panafody satria misy fiantraikany tahaka izany eo amin'ny rafitra androgenic toy ny fampiharana ara-batana. Manangana ny volony amin'ny hozatra izy ary manamaivana ny lanjany manontolo.
Ny fampiasana bodybuilders dia ampiasaina mba hampihenana ny tavy fanampiny avy amin'ny faritra misy ny vatany izay mety ho sarotra ny mifehy na tsy matavy amin'ny alalan'ny fomba hafa. Rehefa mandray an'io zava-mahadomelina io ho an'ny fambolena sy ny fiasan'ny lozisialy dia matetika izy io no entina ao anaty pilina na ranom-biriky. Na dia azonao ampiasaina ny Salbutamol mba hahazoana mavesatra na fatotra raha io ihany no safidy misy.
Orlistat dia pancreatic mahery sy tsindrona lipase marefo. Ny triglyceride rehetra dia atao amin'ny metabolisma amin'ny alàlan'ny pancreatic sy miparitaka. Ny molotra dia mamoaka ny triglycérides ho lasa asidra maitso maimaim-poana izay azo tsaboina ao anaty tsina kely. Ny tsiranoka amin'ny loto sy ny pancreatic dia mifamatotra amin'ny pancreatic sy ny mitefom-panafody ao amin'ny tendrony kely sy ny vavony izay mahatonga ireo enzymes tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy.
Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny hetsik'ireo lipase ireo, ny fihinanana fatin'aretina ihany koa dia voakosoka, ary ny triglycerides dia miala amin'ny gazo. Orlistat dia mampidi-doza manodidina ny 30 isan-jaton'ny sakafo avy amin'ny sakafo avy amin'ny sakafo tsy hiditra amin'ny rafitry ny vatan'olombelona (rehefa manome ny triglycerides ny 30 isan-jato amin'ny angovo amin'ny sakafo). Ny fihenan'ny lanjany mandritra ny herintaona miaraka amin'ny Xenical (orlistat) sy ny fiovan'ny fomba fiaina dia manodidina ny kilaometatra 8.5 kg.
Miaraka amin'ny fihenan'ny fitsaboana ny triglyceride amin'ny sakafo, ny orgieat dia ny lanjan'ny fahavoazan'ny loto:
• Misy fiantraikany tsara amin'ny tosidra;
• Ampihenana ny fihanaky ny cholesterol ary miteraka kolesterola (miaraka amin'ny koloroola LDL);
• Hanamafy ny fanoherana ny insuline; ary
• Manatsara ny fanaraha-maso glycemika.
Maro no mihevitra fa vokatry ny tsy fahampian'ny gastrointestinal ny fiantraikan'ny gastrointestinina amin'ny fomba mitovy amin'ny fanamafisana tsy manara-penitra, izay mamporisika ireo olona ao amin'ity fanafody ity mba hifikitra tanteraka amin'ny sakafo matavy.
Ny Cetilistat dia mavitrika mavitrika, novelarina, pancreatic ary tohibitor gastrointestinal lipase.
Cetilistat ny fidorohana zava-mahadomelina dia zava-mahadomelina natao ho an'ny karazana rongony. Izany dia miompana amin'ny fomba iray toy ny zava-mahadomelina noresahina teo aloha antsoina hoe Xenical (orlistat) amin'ny alalan'ny fifehezana ny pancreatic lipase, ny enzyme izay mamoaka triglycerides ao amin'ny tsinay. Raha tsy misy ireo enzymes ireo, ny triglyceride avy amin'ny sakafontsika dia voasakana tsy hodiovina amin'ny asidra maimaim-poana izay azo tsaboina ary nesorina tao amin'ny vatana.
Anatin'ny fitsapana ara-pitsaboana mahakasika ny marary foibe tsy misy karazana 2 sy ny marary voan'ny diabeta 2. Rehefa nararaka nandritra ny roa ambin'ny folo herinandro ny vesatry ny fihenam-bidy Cetilistat, dia nanjary nihena haingana ny lanjan'ny entana, ny koloroola manontolo, ny lumoproteine ​​lipoproteine ​​siramamy tsikelikely raha oharina amin'ny plasbo.
Ny isan-jaton'ny marary marary mampiseho fihenam-bidy lehibe eo amin'ny lanjan'ny vatan'ny olona farafahakeliny 5 isan-jato dia ambony kokoa amin'ny fiantraikany eo amin'ny sehatra rehetra raha oharina amin'ny plasbo. Ao amin'ny marary diabeta marobe, ny HbA1c (glycosylated hemoglobine) dia nihena be ihany koa. Ny tsiranoka Cetilistat dia nahitana fahalemen'ny fihenan-tsakafo, izay nahatonga ny steatorrhea (toetry ny gastrointestinal) miaraka amin'ny latsa-danja ambany noho ny tao orlistat. Ity zaza ity dia nankatoavina vao haingana tany Japana mba hiatrika ny fahasembanana amin'ny fahasarotana hafa.
Ny famintinana volo poizina
Araka ny hita amin'ny adihevitra amin'ny an-tsipiriany, dia maro ny fidiram-bolan'ny lozam-pifamoivoizana avy any amin'ny fikambanana organika. Ny ankamaroan'ireo zava-mahadomelina ireo dia hita fa mahomby, ary ny sasany amin'izy ireo dia nankatoavin'ny lanonana isan-karazany toy ny FDA sy Japana, mba hanamarihana vitsivitsy, ho an'ny fitsaboana ny matavy loatra.
Rehefa avy nandany ora maro mba hijerena fanafody mahazatra, dia afaka namantatra ny entana 2018 vitsivitsy indrindra amin'ny fitsaboana maimaim-poana manerantany. Ireo fanafody vaksin-dite mavesatra dia mampiditra poids orlistat ary ny lorcaserin poids. Tsy toy ny tsy fahampian'ny fahaverezan'ny fahaverezan-tsakafo hita any amin'ny fivarotana zava-mahadomelina, ireo fanafody matavy izay notakin'ny mpitsabo matihanina dia nandalo nandritra ny taona maro nanaovana fitiliana mba hahazoana mari-pankasitrahana avy amin'ny FDA sy ireo sehatra maro samihafa. Manoro hevitra mafy izahay fa manandrana ireny zava-mahadomelina ireny satria efa voaporofo fa tsy vitan'ny hoe mahomby, fa azo antoka koa ny fampiasana azy.
Lisitry ny lisitra voatondro:
Valiny valinteny valin'ny 58
Mog Arten09 / 21 / 2018 amin'ny 4: 11 pm
Tiako izany fa misy fanafody isan-karazany amin'ny fandoroana sy ny fikajiana. Ny fanamafisana ny fanoheran'ny insuline sy ny fifehezana ny glycemic dia mahery vaika amin'ny fiovan'ny vatany. Mahaliana aho na dia mila mizaka izany aza ny marary ary mijanona amin'ny zava-mahadomelina ho an'ny fiainana. Tiako ny hijery fianarana momba ny vokatra maharitra.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 amin'ny 4: 02 pm
Ny feo toy ny fatiantoka fatiantoka dia manohy manatsara sy mivoatra amin'ny fotoana. Ho liana aho raha misy fepetra azo antoka amin'ny fampifangaroana ny zava-mahadomelina voalaza amin'ny sokajy samihafa. Misaotra tamin'ny fizarana ity lahatsoratra ity.
imah09 / 21 / 2018 ao amin'ny 10: 38 am
2018 tsara indrindra ny famatsian-tombam-bidy amin'ny fividianana vinaingitra. Heveriko fa ireo olona tena mila izany, tokony hanandrana azy ireo aho. Azoko antoka fa hiasa toy ny magy izy.
wumi09 / 21 / 2018 ao amin'ny 10: 30 am
Misy karazan-danjam-panafody be dia be ao an-tsena. Ho marin-toetra aho dia niresaka ela be talohan'izay ary mendrika ny hanorina fiaraha-miasa i AASraw, mieritreritra aho.
Diane Maxwell09 / 21 / 2018 ao amin'ny 9: 05 am
Wow, ity lisitra ity dia tena mahavariana. Heveriko fa fantatro izao ny karazana fahaverezan'ny fahavoazako mila ahy. Tsy fantatro akory aza fa misy karazany isan-karazany arakaraka ny asa / tanjona. Misaotra.
Caroline Warner09 / 21 / 2018 ao amin'ny 8: 58 am
Tsy tena mino ny "majik" ao ambadiky ny fahaverezan'ny fahaverezan'ny fatiantoka aho. Saingy niova izany rehefa nanandrana orlistat aho! Heveriko fa izany no tsara indrindra amin'ity lisitra ity.
admin, admin09 / 21 / 2018 ao amin'ny 3: 26 am
Salama Kitty, azonao atao ny mandefa ny fangatahana aminao amin'ny mailaka tsy manafintohina (king@aasraw.com) raha mila fatram-bary mavesatra ianao. Ho an'ny Prescription na eo amin'ny counter, dia miankina amin'izany. Hiezaka ny izay tsara indrindra vitako aho hanampy anao handray saingy tsara kokoa ny manontany amin'ny dokoteranao torohevitra momba ny matihanina.
admin, admin09 / 21 / 2018 ao amin'ny 3: 14 am
Eny, ireo mpanjifantsika maro dia manome lanja ny lanjan'ny lozan'ny vovony. Nilaza izy ireo fa miasa tsara izy ireo ary tiany izany. Raha ny mikasika ny fahasalamana dia miankina izany, ny zava-mahadomelina rehetra dia misy fiantraikany eo amin'ny sehatra. Koa ilaina ny manome fanafody araka ny tokony ho izy eo ambany soso-kevitrao momba ny dokotera.
Stephanie Kamau09 / 21 / 2018 ao amin'ny 12: 02 am
Maro loatra ny lozam-pandam-barotra eny an-tsena ary ny mahita olona azo itokisana dia fanamby goavana. Fantatro ireo olona izay efa nanandrana ny fandefasana voankazo rehetra tsy misy fanovana. Mihevitra aho fa tokony ho ny safidy voalohany ny famerenana ny fatrany raha tsy misy fanafody prescription.
Captain U09 / 20 / 2018 amin'ny 10: 28 pm
Mety halaiko fotsiny izany satria te hiala amin'ny fikorontanana aho. Mety ho voatery hanadio ny rafitrao aho ary hanalefaka ny fihetsiketsehan'ny tsinay dia mety hanao ny fanitsakitsahana.
mạch09 / 20 / 2018 amin'ny 9: 25 pm
Ny fahaverezan'ny herisetra dia olana foana izay te-hijery tsara. Tsapako fa tsy handao mihitsy ireo fironana ireo. Ny filazan'ny haino aman-jery dia nanaparitaka an'io hafatra fijery tsara io foana. Noho izany dia mieritreritra aho fa mila mampiasa ireo voka-pandam-pahavoazana mavesatra na ny fako amin'ny fako mba hahatonga anao ho tsara kokoa
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 amin'ny 3: 45 pm
Ny Clenbuterol sy ny Salbutamol dia mahomby indrindra amin'ny fitsaboana ny fiterahana sy ny fanatsarana ny asany. Amin'ny ankapobeny, ireo fanafody tahaka ireto dia toa mahomby sy manova ny famoronana ho salama kokoa.
Curt Rancher09 / 20 / 2018 amin'ny 3: 40 pm
Te-hitovy amin'ny tovovavy aho! Tiako ity dokotera manam-pahaizana ity izay afaka manonitra ny maha-supremacy azy. Nahitana zava-mahatalanjona ny fikarohana tamin'ny marary. Misaotra ny fizarana!
Bianca Lively09 / 20 / 2018 ao amin'ny 5: 56 am
Tsy fantatro fa ny fanafarana entin-dite marevaka dia manana sokajy samihafa. Noheveriko fa izy rehetra dia nodorana ny menaka tsy ilaina! Misaotra ny fizarana!
Barney Winchester09 / 20 / 2018 ao amin'ny 5: 54 am
Wow, tena very ny lanjany ho an'ny 1800s? Tsy azoko an-tsaina ny fanampim-panafody ary miezaka ny ho very maina aho, noho izany misaotra an'ity lahatsoratra ity!
Nora09 / 20 / 2018 ao amin'ny 4: 49 am
Misaotra an'io lisitra io! Maro ireo zava-baovao hitranga amin'ny fomba fialana amin'ny voankazo vantany ary ny fomba hahavery ny vatana, sns.
Nikki09 / 20 / 2018 ao amin'ny 2: 12 am
Manoro hevitra ny fampiasana ireo tsiranoka rehetra ireo aho nandritra ny taona maro nanaovana fitsapana ary azo antoka sy azo antoka fa azo antoka izany. Ireo voka-bidy mavesatra ireo dia mety ho fatotra vatana, sakafo ara-pahasalamana ho an'ny fatiantoka mavesatra, aleoko lavitra kokoa izao fomba izao ho fahaverezan'ny tavy. Afaka matoky azy io isika mba hiasa.
Bola09 / 20 / 2018 ao amin'ny 2: 04 am
Certilistat dia fanampiana tsara ho an'ny mpampiasa matavy tokony ho ampiasaina. Izaho dia mihevitra fa tena ho lehibe izy amin'ny farany, rehefa mihena ny tavy ara-batana.
Fanny09 / 19 / 2018 amin'ny 10: 47 pm
Hanoro hevitra an'i Lorsearin ho an'ireo manana tosidra aho ary tena tsara ho an'ny mpihinana lehibe. Hanampy amin'ny fanakanana ny fahazotoana izany ary hanafainganana ny metabolisma.
tia09 / 19 / 2018 amin'ny 10: 37 pm
Olistat dia ho tsara ho ahy, fa amidy eny an-tsena izy io toy ny pilina fihinana alika. Mila manandrana izany aho. Noho izany dia hanampy amin'ny fametrahana ny tavin-tsakafo tsy hihinana sakafo aho.
Sidney Moreno09 / 19 / 2018 amin'ny 9: 53 pm
Orlistat dia tahaka ny fanaingoana tsara ho an'ny lanjany, tsy mbola nandre momba an'io karazam-pitsaboana io aho taloha fa mieritreritra fa tena ilaina izy ireo ary hanampy ho an'ny olona maro, miaraka amin'ny fiofanana sy fahazarana mahazatra sakafo.
Kurt09 / 19 / 2018 amin'ny 9: 21 pm
Afaka mampiasa ireny fanafody ireny ve ny olona? Midika ve aho fa misy olana ara-pahasalamana tokony hoeritreretiko aloha? Heveriko fa zava-dehibe eto ny vaovao fa ny lahatsoratra tsara amin'ny ankapobeny.
Kitty Pryde09 / 19 / 2018 amin'ny 8: 53 pm
Azonao atao ve izany hatramin'izao? Prescription na oviana? Maniry aho fa misy karazana antsipiriany eto. Na izany aza, farafaharatsiny ny fanafody rehetra dia eto.
Chatton09 / 19 / 2018 amin'ny 8: 34 pm
Tsy azoko an-tsaina hoe mahery vaika ny vesatra mavesatra. Heveriko fa mbola mila fanazaran-tena tsy tapaka ianao rehefa mandray ireo fanampiana ireo. Na izany aza, mahafinaritra ahy ny mamaky ny blôgy!
Rae09 / 19 / 2018 amin'ny 8: 28 pm
Tena liana amin'ny fanalana ny tavy vantany be loatra aho. Ny vokatra sasany izay fantatro dia tsiambaratelo ka mamaky ireo labels aho. Misaotra anao ny lahatsoratra informatika! Tena manampy ahy hahafantatra ny fihenan'ny haavo haingana
Landen Burrows09 / 19 / 2018 amin'ny 3: 17 pm
Ny fikambanana Cetilistat sy Clenbuterol dia mahaliana amin'ny fomba fiantraikany eo amin'ny fitomboan'ny vatana. Cetilistat, tsara rafitra digestive ho an'ny vatana, clen dia afaka manampy ny vatanao amin'ny fofona matavy. Afaka mahita marary mangataka fanafody matavy be aho, raha misy fanadihadiana azo antoka momba azy ireny.
Mozer Torancher09 / 19 / 2018 amin'ny 1: 53 pm
Tena zava-baovao izany! Ny fiantraikany amin'ny tsindrim-bola sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso glycemic dia fiantraikany sarobidy hitadiavana fanampiana. ny fiasan'ny lozan-tany, ny drafitry ny traikefa, ny planina fisakafoanana, sns. ireo dia lohahevitra mafana ary tiako izany, mieritreritra aho fa tena manampy ahy ny manomboka ny lanjan'ny fahaverezako. Misaotra ny fizarana!
Justin Dee09 / 19 / 2018 ao amin'ny 10: 41 am
Tsy nanandrana na inona na inona ny famatsiam-bidy aho, ary tsy hitako mihitsy ny manandrana izany amin'ny hoavy tsy ho ela. Matetika aho no mihinana sakafo mahavelona, ​​manao kaloria sy tsy fahampian-tsakafo ary miasa mafy any amin'ny gym. Fandaniam-bola, azo.
Marco Antonio09 / 19 / 2018 ao amin'ny 10: 39 am
Natahotra aho tamin'ny fanandramana fanafody fahavoazana, saingy ity lahatsoratra ity dia nanome ahy ny fomba fijeriko ny tena fomba fiasa, ary ny maha-izy azy. Misy karazana zava-mahadomelina maro eto, ka mila mamolavola izay miasa ho anao tsara indrindra ianao. Ny dokotera mpanofana dia mety ho tsara ihany koa.
Charmaine Bush09 / 19 / 2018 ao amin'ny 9: 06 am
Orlistat dia niasa ho an'ny mahagaga. Mino aho fa tsy ny zava-mahadomelina irery no lanjany. Tokony hampifangaro azy io amin'ny asa atao ara-batana sy ny sakafo ara-pahasalamana ara-pahasalamana / mahomby mba hahita ny vokatra iriantsika.
Jonathan Gordon09 / 19 / 2018 ao amin'ny 9: 03 am
Wow, ireo zava-mahadomelina ireo dia manenitra avokoa. Niezaka ny tsy hanana lanjany ho an'ny 2 taona izao aho, ary mbola tsy nahita ny valiny aho. Angamba fotoana izao no ezahako hampihena ny famatsiam-bidy.
admin, admin09 / 19 / 2018 ao amin'ny 5: 46 am
Hi namana, aza manahy. Ny zava-mahadomelina rehetra dia misy fiantraikany mahatsikaiky. Fa miankina aminy izany. Hahazo tombontsoa bebe kokoa avy amin'ny fahavoazan'ny fahavoazana ianao raha raisinao tsara ary ho tsara kokoa ny fanatanjahantena. Ny mpanjifa sasany dia nandidy ny vovo-dronono sibutramine sy lorcaserin avy amintsika, nilaza izy ireo fa tsara ny asa ary tena tia azy ireo.
admin, admin09 / 19 / 2018 ao amin'ny 5: 37 am
Misaotra ny hevitrao. Ny zava-mahadomelina rehetra dia misy fiantraikany. Arakaraka. Saingy heveriko fa ny poety lorcaserin sy ny orlistat dia ho tsara hevitra ho anao araka ny traikefan'ny mpanjifa. Indrindra ho an'ny lorcaserin, dia nitatitra ny BBC vao haingana ary tsy dia misy vokany ratsy.https://www.bbc.com/news/health-45319393
Easter09 / 19 / 2018 ao amin'ny 3: 21 am
Tsy mino aho fa hisy zavatra maharary amin'ny fahazoana fanafody mavesatra amin'ny lanjany satria efa notohanan'ny FDA sy Japan.Ireo anisan'ireo soso-kevitra ireto dia tokony hampidirina amin'ny fatiantoka mavesatra, satria very lanja matavy izy ireo. Plus ny lanjany amin'ny fihenan-tsakafo, dia afaka mandoro anao matavy haingana ianao.
Autus09 / 19 / 2018 ao amin'ny 3: 11 am
Tsara ho anao ny mampiseho ny fitsaboana tsara indrindra. Mamaky fanontaniana tahaka izao aho amin'ny lozam-pifamoivoizana lalina sy ny valim-panontaniana tsy dia mety loatra. Manantena aho fa ireo izay tena mila izany vaovao izany dia mahita azy io.
Lisa Nataliany09 / 19 / 2018 ao amin'ny 12: 58 am
Tiako ny misakafo sy misotro, noho izany dia mitaky herim-po foana aho. Raha toa ity fitsaboana ity dia afaka mikarakara ny vatako tsy mila misakafo, dia mahafinaritra ny mahita ity lahatsoratra ity. Misaotra anao!
David Tjoe09 / 18 / 2018 amin'ny 10: 21 pm
Tsy nanandrana na inona na inona ny famatsiam-bidy aho, ary tsy hitako mihitsy ny manandrana izany amin'ny hoavy tsy ho ela. Matetika aho no mihinana sakafo mahavelona, ​​manao kaloria sy tsy fahampian-tsakafo ary miasa mafy any amin'ny gym. Fandaniam-bola, azo. Fa ny sasany amin'ireo olona mavesatra hitako, sarotra ho azy ireo ny manjary lanjany, satria miankina fotsiny amin'ny fitanana sy ny fitantanana ny tsimokaretina kalorie dia tsy mahatratra ny lanjany. Mety hanampy azy ireny ny tabilao mavesatra.
Alex Summers09 / 18 / 2018 amin'ny 8: 45 pm
Tokony hihinana tsara an'io zava-mahadomelina io daholo ny cufflinks rehetra ary hijery hoe ahoana no ahafahany mandany lanja tsy misy fiatraikany manokana, indrindra ho an'ireo izay tsy mampihatra. Manaova drafitra momba ny sakafo ho an'ny lehilahy, manolora azy ireo hihinana sakafo mahasalama, hihinana sakafo mahasalama. Ny fihenan'ny lanjany amin'ny fihinanana dia tsy fomba haingana amin'ny fahaverezana fatotra
Scott Summers09 / 18 / 2018 amin'ny 8: 26 pm
Tsy maintsy anontaniako ny dokotera aloha raha toa ka azo antoka izany. Azo atao ve io ankehitriny? Raha ny marina, fantatro kely fotsiny momba ny sibutramine sy ny vovobony orlistat avy amin'ny namako. Heveriko fa mila mianatra bebe kokoa aho avy eo manao zavatra.
Moz Chesk09 / 18 / 2018 amin'ny 3: 07 pm
Faly aho fa afaka manome antoka ianao fa ireo fitaovana ireo dia azo antoka sy mahomby amin'ny fampiasana. Ny fanodinkodinam-pangoraham-po toy ny serfa Sibutramine sy ny lasoavina Lorcaserin dia toa sarobidy indrindra amin'ny fomba fitondrany ny saina sy ny vatana. Hitako ireo zava-mahadomelina ireo izay misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fomba fiainan'ny olona amin'ny fikarohana rehetra mba hiantsoana azy ireo.
Maury Cheskes09 / 18 / 2018 amin'ny 3: 00 pm
Izy ireo dia tsara tokoa raha voaporofo fa very maina izany. Mahagaga fa ny sasany amin'izy ireo dia miasa toy ny Orlistat sy ny Synephrine miaraka amin'ny fihinanana sy ny tavy mirehitra. Misaotra ny fizarana!
Kuttan09 / 18 / 2018 ao amin'ny 10: 50 am
dia tsara ny, fa misy vokany hafa mahatsiravina momba ny lanjany fa be ahiahy bebe kokoa momba ny tsinay dia mety hampihena ny ampahany hafa ao amin'ny body rehetra, toy ny sibutramine, tiako ny hanandrana ny sasany saingy nanahy koa aho momba ny vokatra hafa. Ampio aho?
Marc P09 / 18 / 2018 ao amin'ny 10: 46 am
Tena afaka mamonjy ain'olona tokoa aho, tena hampahafantariko ny fianakaviako sy ny namako izany. Midika izany fa mila mahazo antoka isika fa na inona na inona isika dia mandray ny lanjan'ny voka-bary dia tsy hanimba ny fahasalamantsika.
Charlene G09 / 18 / 2018 ao amin'ny 10: 43 am
Tena nanampy be dia be aho fa tsy nisy niasa ho ahy. Ary ny sasany amin'izy ireo dia niteraka fiantraikany ratsy. Mahafinaritra ity lahatsoratra ity izay mampiseho fampahalalana lalina momba ity fanampiana ity. Manantena aho fa afaka miezaka manaparitaka vidy kely ihany koa aho mba hisorohana ny fiantraikany hafa. Misy torohevitra ve?
Fatty Patty09 / 18 / 2018 ao amin'ny 9: 37 am
Teo amin'ny takelaka vita tamin'ny vovoantitra orlistat. Tsy afaka mihinana sakafo matsiro, mena na KFC! Maty amin'ny vavony aho ary ... fantatrao. Hahaha
Amila-lionaire09 / 18 / 2018 ao amin'ny 9: 33 am
Orlavat Orlistat dia manana fiantraikany tsara amin'ny fahavoazana mavesatra ary nahafantatra olona iray aho.
ufan09 / 18 / 2018 ao amin'ny 8: 46 am
Mila manandrana ny poezia HCC aho, satria tsara ho an'ny metabolism ary mety hanafoana ny fangatahana sakafo. Ny fihinanana sakafo dia ny olana lehibe indrindra hatramin'izay.
fandriampahalemana09 / 18 / 2018 ao amin'ny 8: 39 am
Ity lahatsoratra ity dia ho ahy satria tsy maintsy miezaka ny ho very ela aho izao. Ity lahatsoratra ity dia tena mety amin'ny fotoana mety hikaroka ny fikarakarana matsiro indrindra amin'ny fampiasana fatin'orana. Avy eo dia hoeritreretiko ny lanjan'ny fahaverezan-danja ho ahy ary hividy azy ireo tsy ho ela. Izany dia lahatsoratra tena mahatalanjona.
Carrie09 / 18 / 2018 ao amin'ny 5: 17 am
Nalain-baraka aho talohan'ny hahafatesako fotsiny. Na izany aza, heveriko fa misy fiantraikany ratsy amiko izany ka tsy mijanona intsony aho. Mbola misalasala aho mikasika ny faharetan'ny vinaingitra.
Laura09 / 18 / 2018 ao amin'ny 4: 27 am
Efa nanandrana famatsiana lanja be dia be aho taloha nefa indrisy fa tsy tena miasa amiko izy ireo. Misaotra an'io lahatsoratra tena mampita vaovao io. Raha ny zava-misy ankehitriny, tiako ny vatako toa ny fanaony ihany.
AJ09 / 18 / 2018 ao amin'ny 1: 40 am
Gaga aho fa betsaka ny lanjan'ny fahaverezan'ny vovobony any an-tsena. Nieritreritra ny haka indray andro indray aho hameno ny safidiko ankehitriny. Na izany aza, tahaka ny mila prescriptions manokana aho mba hividianana iray monja amin'ny mpanohitra? Sa misy zava-mahadomelina azoko atao nefa tsy mila filazana?
Pritesh Vishwakarma09 / 18 / 2018 ao amin'ny 12: 47 am
Tsy voatery ho tsara ho an'ny olon-drehetra ny voka-dratsiny. Ireo olonagengener ny olona ho an'ny sakafo mahavelona amin'ny fatiantoka mavesatra dia tsy maintsy mikaroka fanafody voajanahary.
bran09 / 17 / 2018 amin'ny 11: 40 pm
Misy lisitra maromaro ao amin'ny lisitry ny fitsaboana tsara indrindra manerantany. Tiako ny fanampim-panazavana satria misy foana ny fahombiazany raha ilaina tokoa ny fanaraha-maso ny potion ary ny fomba fanatanjahan-tena tsara ihany koa. Manoritra ity pejy ity ho an'ny fanamarihana amin'ny ho avy.
Bassy09 / 17 / 2018 amin'ny 11: 34 pm
Ity dia lahatsoratra tena tsara ho ahy, mandeha amin'ny lozam-pifamoivoizana aho ary niady tamin'ny lanjako hatramin'ny nivoahan'ny sekoly ambaratonga faharoa. Tokony hanamarina ny Sibutramine HCL (Meridia) CAS.it toa izany no izy
Vikram Parmar09 / 17 / 2018 amin'ny 10: 57 pm
Betsaka ny zava-mahadomelina manampy amin'ny fahaverezan'ny lanjany. Tena mahomby ireo fanafody ireo.
Jiffy Rando09 / 17 / 2018 amin'ny 9: 37 pm
Ny fiasan'ny meds + sy ny sakafo mahazatra dia ny fitaovam-piadiana ananako. Na dia najanoko aza aho izao mba hitazona sasatra kely. Angamba rehefa miverina amin'ny fahazahako aho dia hampiasa izany.
Erza Scarlet09 / 17 / 2018 amin'ny 9: 23 pm
Ahoana no tsy hitenenan'olona momba ny fanafody? Izaho dia eto foana ny lafiny ara-batana na ny lafiny sakafo ara-pahasalamana amin'ny lalao amin'ny resaka momba ity lohahevitra ity saingy ity no fotoana voalohany hijerena meds ny latabatra. Fanampiny angamba fa mbola. 2
Janice09 / 17 / 2018 ao amin'ny 10: 38 am
Miezaka ny ho very ny lanjany aho ka faly be aho nahita ity lahatsoratra ity izay manome fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fisafidianana ny vidin'ny fitsaboana mety. Izany dia manome ahy fampahalalam-baovao mahazatra izay tsy azoko atao izay ahafahako manao safidy tsara ho ahy. Misaotra!
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny 2018	Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) ao amin'ny tsenan'i Armodafinil